Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. भारतीय बाँधका कारण कपिलवस्तुमा हजारौ बिगाह खेतीयोग्य जमीन डुवानमा – Emountain TV
कपिलबस्तु, ३० भदौ । भारतीय बाँधका कारण कपिलवस्तु जिल्लामा हजारौँ बिगाह खेती योग्य जमिन डुवानमा पर्दै आएको छ । जिल्लाको यशोधरा गाँउपालिकाको ७ र ८ वडाको दुई हजारभन्दा बढी बिगाहा खेती योग्य जग्गामा उब्जनी नहुने भएको छ ।
यसैगरी महाराजगंज नगरपालिकाको वडा नं. ८ र १० का दुई हजार बढी विगाहा खेती योग्य जग्गा बगरमा परिणत भएको छ । भारतीय बाँधले गरेर नेपालको तराई क्षेत्र हरेक बर्षातमा डुवानमा पर्दै आएको छ ।
सुख्खा समयमा भने बाँध खोलेर नेपालमा पानी अभाव हुने गरी लाने अनि बर्षाको समयमा तराई डुवानमा पर्ने गरी खोल्न आनाकानी गर्ने भारतीय प्रवृतिले तराईका बासिन्दाहरु बर्षौँदेखि पीडित छन् ।
भारत उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिल्ला शोहरतगढ क्षेत्र अन्तरगत र जिल्लाको नेपाल सिमाको दश गजा देखि नजिकै शोहरतगढ तहसिलमा पर्ने झरुवा(हेटवा) नदीमा १६ वटा बाँध निर्माण गरेपछि नेपालको खेती योग्य जमिन डुबानमा पर्ने भएकोले स्थानीय बासी चिन्तित भएका छन् ।
सो बाँध निर्माण भए पछि जग्गा डुबानका कारण रोपिएका धानबाली नष्ट हुने स्थानीयहरुको पीडा छ । दक्षिणका २० गाउँ डुबानबाट प्रभावित हुने छन् । बाँध निर्माण पछि रोपिएका अन्न बाली नष्ट हुने वर्ष दिन भरी खेती गरेर परिवार पाल्ने खेत बाढीले बगरमा परिणत हुन जाने भएकोले सर्वसाधारण निकै चिन्तित बनेका छन् ।
यस क्षेत्रबाट नजिकै रहेको भारतीय बाँधका कारण नेपालको हजारौं बिगाहा उब्जनी जग्गामा केही उत्पादन हुँदैन । भारतलाई पानी चाहिएको बेला बाँधको १६ वटै फाटक खोली नदीको पुरै पानी लैजान्छ ।
त्यतिबेला नेपालतर्फ भने सुख्खा हुन्छ । भारतले असार साउनमा पानी बढी परी बाढी आएको बेला भने बाँधको १६ वटै फाटक बन्द गर्ने गर्छ ।
यसरी बर्षाैँदेखि भारतीय बाँधका कारण तराईका बासिन्दाहरु मारमा परेका छन् । बाँधले गर्दा खेतीमा निर्भर रहेका सयौँ कृषक परिवारहरुको बिचल्ली भएको छ । वर्षेनी यस्तो समस्या देखिए पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले अझै ध्यान दिएको छैन । तीन तहको सरकारको वेवास्ताका कारण स्थानीयवासिन्दा अहिले पनि निरास छन् ।